Kitra any Eoropa : nametra-pialana tsy hanazatra ny Real i Zidane | NewsMada
Kitra any Eoropa : nametra-pialana tsy hanazatra ny Real i Zidane
Vaovao lehibe nampivarahontsana izao tontolo izao ny fanambarana nataon’i Zinedine Zidane fa tsy hanazatra ny ekipan’ny Real Madrid intsony ny tenany. Tsy nisy anefa ny disadisa eo aminy sy ny Real Madrid.
Dimy andro taorian’ny nahazoan’ny Real Madrid ny tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions” fanintelony, nanambara tamin’ny alalan’ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly 31 mey, i Zinédine Zidane fa hitsahatra ary tsy hanazatra ny Real Madrid, intsony.
Loza ho an’ny Real Madrid sy ho an’ny tontolon’ny baolina kitra izao fanapahan-kevitra tsy nisy nanampo, nataon’i Zidane, izao. Tsy mbola fahita hatramin’ny taona 1970 no ho mankaty ny mpanazatra nahavita vokatra tsara, toy ity vitany ity, mametra-pialana.
“Noraisiko izao fanapahan-kevitra izao, izay heveriko fa fotoana tsara ho an’ny rehetra. Heveriko fa tsy maintsy manohy ny fandreseny ny ekipa, izay mila fiovana sy fomba fiasa vaovao”, hoy izy. Na izany aza, haharitra hatramin’ny taona 2020 ny fifanaraham-piara-miasany amin’ny Real Madrid. Tsy mbola nanambara kosa anefa i Zidaneamin’izay mety hataony na ny ekipa hoentiny, aorian’ny Real Madrid.
“Tsy nampoizina ity fanapahan-kevitr’i Zidane ity”, hoy i Florentino Perez, filohan’ny Real Madrid, tao anatin’ny fahatezerana tanteraka. Noraisiny ho fahakanosana izao teny nataon’i Zidane izao.
Tsiahivina fa i Zidane irery ny hany mpanazatra nahazo ny tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions” intelo misesy (2016, 2017, 2018). Marihina fa voatendry ho mpanazatra ny Real izy, ny 4 janoary 2016, izay nanolo an’i Rafael Benitez. Efa nahazo anaram-boninahitra maro, toy ny tompondakan’i Espaina sy ny «Supercoupe Espaina», tamin’ny taona 2017, ny tenany. Indroa nahazo ny «Super coupe de l’UEFA », ny taona 2016, 2017, ary indroa tompondaka eran-tany, ho an’ny klioba, ny taona 2016, 2017.